N'ogbe Custom Crew Neck Jumper Men Heather Raglan Sleeve Sweatshirts emepụta na suppliers | Yiwan
Omenala Crew Neck Jumper Men Heather Raglan Sleeve Sweatshirts
China kpara oke owu
Crew olu imewe
Raglan aka uwe
dabara mgbe niile
Edepụtara nha niile na sentimita asatọ.
Agba ikpeazụ dabere na ụdị akwa.
A1: Akara ngosi ahaziri ahazi, mkpado, akara na trims ahaziri ahazi ga-ekwe omume.
Q2: Ị nwere ngwaahịa na ngwaahịa?
A2: N'ozuzu, anyị enweghị ngwaahịa nke ụdị ọ bụla. Mana ị nwere ike lelee weebụsaịtị anyị maka akụkụ ngwaahịa.
Q3: Ogologo oge ole maka mmepụta oge gburugburu?
A3: Ọtụtụ mgbe 30-35 ụbọchị ọrụ mgbe ekwenyechara nkọwa niile. Ma dabere n'ichepụtakwa.
Nke gara aga: Ụzọ Ndị ikom Owu Eyelet V-olu Henley T-shirts
Osote: Omuma Mgbụsị akwụkwọ Jumper Ndị nwoke na-eme olu owu Pullover Sweatshirt
Ude Ejiji okporo ụzọ Pullover Hooded Sweatshirt...
Akara akwa Terrycloth Pụrụ Iche Ngwa ngwa akwa akwa...
Ndị ikom Ejiji ndị ọrụ olu olu ndị agha mmiri Multi Tie Dye Sweats...
Raglan ogologo uwe ogologo nwoke nwere ụda abụọ…
Ụzọ Asymmetric Hem Vintage Colorblock ...
Chic Urban Uwe Akpara Cupro Fiber T-shirt Short...